Myanmar Java User: Cryptology နှင့် အလဂိုလီဇင်
Cryptology နှင့် အလဂိုလီဇင်
Cryptology ဆိုသည်မှာ Kryptos နှင့် Logos ဆိုသည့် ဂရိဘာသာရပ်မှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ Kryptos ဆိုသည်မှာ လျှို့ဝှက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ logos ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံပညာဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ဆိုရမည် ဆိုလျှင် လျှို့ဝှက်ခြင်း သိပ္ပံပညာဟု အမည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းပညာရပ်တွင် ဝှက်ခြင်းနည်းပညာနှင့်၊ အဖြေထုတ်ခြင်းနည်းပညာတို့ရှိကြ၏။
လူတစ်ယောက်သည်၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အခြားတစ်ယောက်ယောက်အား လျှို့ဝှက်စွာ ပြောကြားလိုပါက၊ ထိုသူ တစ်ယောက်တည်းသာ သိနိုင်သော ဘာသာရပ်ဖြင့် အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပေသည်။ ထို့အတွက် အကြောင်းကြားလိုသည့်အရာကို စကားဝှက်ဖြင့် ပြောကြားပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ထိုစကားဝှက်အား သိစေလိုသူက နားမလည်ပါက အဓိပ္ပါယ်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ဆိုရမည်ဆိုလျှင် စကားဝှက်သည် မိမိတစ်ယောက်တည်း သိ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိမည်မဟုတ်။ အကြောင်းကြား လိုသူအား အခြားသော သူများမသိစေပဲ အကြောင်းကြားနိုင်မှသာ အသုံးဝင်သော စာကားဝှက် ပညာတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွှန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မကြာခဏ ကြည့်ဘူးမည် ဖြစ်သည့်လူရွှင်တော်များ ပြောဘူးသော ဟာသများကို ပြန်သတိရမိပါသည်။ ပင်လယ်ဓမြ ဟုပြောပြီး၊ ပင်လယ်သည် ကျယ်၍ ဓမြသည် တိုက်သောကြောင့် ကျယ်တိုက်၊ ကြိုက်တယ်ဟု ပြန်ပြောဘူးသည်ကို သတိရမည် ဖြစ်သည်။ အလွန်ကို အဆင့်မြင့်သော စကားဝှက် တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
စာကားဝှက်တစ်ခုတွင်၊ စကားဝှက်တစ်ခုနှင့်၊ ဖြေရှင်းရန် ဖြေရှင်းနည်းနှင့် သူ၏ အဖြေဆိုပြီးရှိလေ့ရှိကြ၏။ သိစေလိုသူနှင့် မိမိသာ ဖြေရှင်းနည်းကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီး၊ စကားဝှက်ဖြင့် အကြောင်းကြားမည် ဆိုပါက၊ ဖြေရှင်းနည်းကို သိရှိထားသူများသာ ပြောကြားလိုသည်များကို သိရှိနိုင်မည်ပေသည်။
မိမိကအကြောင်းကြားလိုသည့်အရာကို သိစေလိုသူမှအပ မသိရှိစေရန် စကားဝှက်ပညာကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူတိုင်းမသိစေလိုသော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အကြောင်းကြားလိုသောအခါ။ တဖက်ကစဉ်းစားကြည့်မည် ဆိုလျှင် လူတိုင်းသိပြီးသောအရာ တစ်ခုကို စကားဝှက်သုံး၍လည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ လူတိုင်းမသိသော အချက်အလက်တစ်ခု၊ တန်ဖိုးရှိသော သတင်းတစ်ခုဟု တွေးလို့ရပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုတွင် တန်ဖိုးဆိုသည်မှာရှိ၏။ တန်ဖိုးကို မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။
လူမသိသောသတင်းသည် တန်ဖိုးရှိမည်လော။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ငါတို့အိမ်နောက်ဖေးက ကိုသော်ဇင်မှာ မိန်းမနှစ်ယောက် ရှိတယ်ဟေ့။ ဆိုကြပါဆို့။ လူတိုင်းမသိပါ။ ဒါဆိုရင် တန်ဖိုးရှိသော သတင်းတစ်ခုလား။ လျှို့ဝှက်စကားနှင့် အကြောင်းကြားစရာ သတင်းတစ်ခုလား။ သတင်းတစ်ခု၏ တန်ဖိုးကို မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။ ရှားတိုင်း၊ လူမသိတိုင်း တန်ဖိုးရှိသည်မဟုတ်။
လူတိုင်းလိုချင်၊ သိချင်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို၊ မည်သူမှ မသိသေးခင် သိရှိခြင်း။ များသောအားဖြင့် ဤအတိုင်း သတ်မှတ်ထားကြ၏။ တန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များ၏ တန်ဖိုးကို ထိမ်းသိမ်းရန်၊ လုံခြုံစိတ်ချမှု့ ရှိစေရန်၊ လျှို့ဝှက်ခြင်းပညာရပ်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြ၏။
ဤလျှို့ဝှက်ပညာရပ်သည် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်မှာ အလွန်ကိုကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်၏။ ရှေးဟောင်းဘာသာရပ်များတွင်ပင် Cryptograph များကိုအသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ကြရ၏။ လူတိုင်းတွင် လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယ်စီရှိကြသည် ဆို၏။ အခြားလူကို မသိစေလိုသောအရာများရှိလိမ့်မည်မှာ ဧကန်ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပင် ဤစကားဝှက်နည်းပညာကို အသုံးများခဲ့သည်မှာ စစ်ပွဲအသီးသီးတွင်ဖြစ်၏။ နိုင်ငံတစ်ခုနှင့် တစ်ခု စစ်ဖြစ်ပွားရာတွင် သတင်းများသည် လွန်စွာမှ အရေးပါလာပေသည်။ ထိုသတင်းများအား အခြားနိုင်ငံတစ်ခုထံသို့ မပေါက်ကြားစေရန် လျှို့ဝှက်ပညာသည် လွန်စွာမှ အသုံးလိုသောပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အသုံးဝင်သော ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့၏။
စိတ်မကောင်းစရာ ကောင်းလောက်အောင်ပင် နာမည်ကြီး စစ်ပွဲမျာတွင် စကားဝှက်ပညာ၏ နေရာမှာ အလွန်ကိုနေရာရခဲ့၏။
ဘာကြောင့် စစ်မဖြစ်တော့တဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာဘာလို့ စကားဝှက်ပညာလာပြောနေတာလဲဟု ဆိုလိုသူတွေရှိပေမည်။ စစ်သာ မျက်မြင်ထင်ရှား မဖြစ်တော့တာ၊ ဒီခေတ်ကြီးသည် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ သတင်း စစ်ပွဲမျာဖြစ်ပွားနေကြ၏။ သတင်းများသည် နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းတွင် ပြန့်နှံ့နေ၏။ မည်သည့်သတင်းသည် မှန်ကန်၍၊ တန်ဖိုးရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲသော ခေတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမဆို သတင်းကို ထုတ်ပြန်သူဖြစ်သလို၊ မည်သူမဆို သတင်းကို သုံးစွဲသူလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သတင်းတစ်ခုကြောင့်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွားသည်မှာလည်း မနည်းတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် သတင်းသည် လွန်စွာမှ လျှို့ဝှက်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ လွန်စွာမှ တန်ဖိုးရှိလှသည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သတင်းကာကွယ်ရေး ဥပဒေများ တိုးတက်ပြီးဖြစ်သောနိုင်ငံများတွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ ဥပဒေ၏ ကွာခြားမှု့၊ သတင်းအပေါ်တွင်ထားရှိသော တန်ဖိုး၊ အစရှိသည်တို့ကြောင့် လူတိုင်းသည် မိမိ၏ သတင်းများကို မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်၏။
လျှို့ဝှက်ခြင်းပညာရပ်အား စိတ်ဝင်စားမိသည်မှာ၊ တန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များအား ကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင်၊ လွန်စွာမှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်၏။ စိတ်ဝင်စားမိသည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကြောင့်ဟု ပြောသော်လည်း သိပ်ပြီးအသက်မဝင်လှ။ စောစောက မြန်မာစကားဝှက်ကို ပြန်ဖော်ပြပါမည်။
"ပင်လယ်ဓမြ" = ကြိုက်တယ်
ပင်လယ်သည်ကျယ်၍ ဓမြသည် တိုက်သောကြောင့် ကျယ်တိုက် ကြိုက်တယ် ဖြစ်၏။ မည်မျှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသနည်း။ ပုဒ်စာတစ်ခုရှိ၍ အဖြေတစ်ခုရှိ၏။ ထိုအဖြေကို ရရှိရန် ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ထိုပုဒ်စာကို ရေးသားသူမှာ အဆင့်မြင့်လေး ဖြေရှင်းရသည်မှာ ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပေ ဖြစ်၏။ တနည်းဆိုရသော် ဖြေရှင်းရခက်ခဲလေ၊ အဖြေထုတ်ရသည်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလေ ဖြစ်၏။ ထိုအထဲတွင် ပုဒ်စာဝှက်သူ၏ ဆိုလိုရင်းကို သွားမြင်မိပါက အဖြေထုတ်သူအတွက်မှာ အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်ပေတော့၏။
ဖြေရှင်းလိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤနေရာ၌ ကျွှန်တော်မြတ်နိုးသော Java ဖြင့် ဖြေရှင်းနည်း နည်းပညာများကို လေ့လာရင်း ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်အပတ်တွင် လျှို့ဝှက်ပညာရပ်တွင် အသုံးများသော XOR အလဂိုလီဇင်အကြောင်းကို လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအကြောင်းများကို Java ဖြင့်ရေးသားကြည့်ပြီး၊ ဖြေရှင်းပုံကိုလည်း Java ဖြင့်စဉ်းစားသွားပါမည်။
Posted by JDC at 23:52
linnthant 6/24/12, 2:35 PM
ျမန္မာ Font ေတြက တမ်ိဳးၾကီးျပေနတယ္ အကို ကၽႊန္ေတာ. ကြန္ပ်ဴတာမွာ Myanmar3Font ရွိျပီးသားပါ
zaw min Lwin 7/21/12, 6:10 PM
I think you need to change your browser configuration. Select encoding system to utf-8 and selectaunicode font such as Myanmar 3, Padauk or some other unicode font.